Sida loo kiciyo habka mugdiga ee Google Earth | Androidsis
Guriga tumaalka, mindi alwaax ah. Google, sida Apple, maahan midka ugu horreeya ee cusbooneysiiya mid kasta oo ka mid ah codsiyada ay u diyaariyaan macaamiishooda markay ku darayaan shaqooyin cusub, gaar ahaan haddii ay ku saabsan tahay codsiyada aan la isticmaalin maalin ka maalin, laakiin yaanay sidaa noqon.
Tusaalaha ugu dambeeya ee dayaca shirkadahaan nidaamka deegaanka ee barnaamijyadooda waxaa laga helaa arjiga Google Earth (xitaa dhib kuma qabin inaan ka hadalno khariidadaha Google), codsi waa inuu gudbiyaa in ka badan hal sano tan iyo markii la sii daayay Android 10 iyadoo lagu taageerayo qaabka mugdiga ah si loo bilaabo helitaanka taageerada mawduucan ku jira barnaamijka.
Hawshan cusub waxaa lagu hawlgelinayaa dhinaca server-ka, markaa si qasab ah ayaa loo heli karaa marka nooca ugu dambeeya ee codsigan la rakibo. Ku awood u yeelo habka mugdiga ah ee Google Earth Waa inaan qaadnaa tillaabooyinka aan ku faahfaahiyay xagga hoose.
Markaanu furno arjiga, dhagsii saddex xariiq oo jiifa oo ku yaal geeska bidix ee kore ee shaashadda.
Marka xigta waxaan aadeynaa goobaha.
Settings gudaheeda, waxaan raadineynaa qeybta General. Qeybta dhexdeeda, xulashada ugu horeysa ee la muujiyey waa Mowduuca Madoow.
Markaad gujiso xulashadan, saddexda ikhtiyaar ee ay na siiso waa la soo bandhigi doonaa: Nidaam, Madoow iyo Iftiin. Habka mugdiga ahi wuxuu beddelaa oo keliya midabka waxyaabaha isku-xidhka ah marka lala macaamilayo sawirrada dayax-gacmeedka.
Markay Google ku dhibto inay cusbooneysiiso barnaamijka Khariidadaha Google si ay sidoo kale u taageerto habka mugdiga ah, fursadaha ayaa ah inaysan ahayn oo keliya in is-dhexgalka adeegsaduhu mugdi galo laakiin sidoo kale khariidadaha ayaa jeclaan doona qaabka hagidda ee codsigan kaas oo la jaan qaadaya habka mugdiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida looga hawlgeliyo habka mugdiga ah Google Earth
Google Pay wuxuu kordhiyaa tirada bangiyada la taageero Spain